ỌLU OZI 19 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (ỌLOZ 19)
ỌLU OZI 19
Mgbe Apọlọs nọgidere na Kọrint, Pọl gakwara nꞌihu nꞌije ya. Ọ bịaruru Tọki. Nꞌebe ahụ ọ hụrụ ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Onyenwe anyị.
Ọ jụrụ ndị a ajụjụ sị ha, “Unu natakwara Mmụọ Nsọ mgbe unu kweere?” Ha zara sị ya, “Ọ dịghị! Anyị aghọtaghị ihe ị na-ekwu. Gịnị bụ Mmụọ Nsọ?”
Pọl jụrụ ha ajụjụ ọzọ sị, “Gịnị ka unu kwenyere nꞌime ya mgbe e mere unu baptizim?” Ha zara sị ya, “Anyị kweere nꞌihe nile Jọn omee baptizim ziri.”
Mgbe ahụ Pọl kọwaara ha na baptizim Jọn bụ ihe gosiri na ndị e mere ya chọrọ inwe mkpebi ichegharị site na mmehie ha bịakwute Chineke. O gosikwara na ndị e mere baptizim ahụ, jikeere ịga nꞌihu ikwere na Jisọs Onye ahụ Jọn kwuru na ọ ga-abịa.
Mgbe ha ghọtara ihe ndị a, e mere ha baptizim nꞌaha Onyenwe anyị Jisọs.
Mgbe Pọl bikwasịrị ha aka ya abụọ nꞌisi, ha natara Mmụọ Nsọ. Ha kwukwara okwu nꞌasụsụ dị iche iche, buokwa amụma.
Ndị mere ihe ndị a ruru mmadụ iri na abụọ.
Emesịa, Pọl jekwuuru ndị Juu nꞌụlọ nzukọ ha, na-agwa ha okwu, ma gbalịakwa ime ka ha nabata ihe ọ na-ezi ha banyere alaeze Chineke. O mere nke a ọnwa atọ.
Ma ụfọdụ ekwereghị okwu ya, kama ha kwuru okwu megide Jisọs. Nꞌihi nke a Pọl hapụrụ ha. Ọ gwakwaghị ha okwu Chineke ọzọ. O kewapụrụ ụmụ Chineke ka ha nwee nzukọ dị iche nꞌebe ọzọ. O bidoro nzukọ ọzọ nꞌụlọ nzukọ otu nwoke a na-akpọ Tiranọs, nke dị nꞌime obodo ahụ. Ọ na-ekwusakwa okwu Chineke nꞌebe ahụ ụbọchị nile.
Ihe ndị a gakwara nꞌihu afọ abụọ. Ndị nile bi na Tọki, nke dị nꞌEsia, nụkwara ozi ọma Onyenwe anyị Jisọs. Ọtụtụ nꞌime ha bụ ndị Juu ma ndị ọzọ bụ ndị Griik.
Onyenwe anyị tụkwasịrị Pọl ike, ime ihe ịrịba ama dị iche iche.
Ihe ịrịba ama o mere dị ukwuu. Nke ka nke, a na-ewere ụfọdụ nꞌime akịsị ma ọ bụ ịchafo ọ na-eji ehicha ihu na-atụkwasị nꞌahụ ndị ọrịa, ka ahụ dịkwa ha ike. E sitekwara na ya chụpụ mmụọ ọjọọ.
Ụfọdụ ndị Juu dịkwa ndị na-ejegharị nꞌobodo dị iche iche na-achụpụ mmụọ ọjọọ nꞌime mmadụ. Ha chọkwara ime nke a nꞌaha Jisọs. Ihe ha na-agwa mmụọ ọjọọ bụ nke a, “E ji m aha Jisọs onye Pọl na-ekwusa nye gị iwu ka i site nꞌime ya pụta.”
Ndị na-eme ihe dị otu a bụ ụmụ asaa Skiva onye nchụaja ndị Juu.
Mgbe ha mere ihe dị otu a nꞌebe otu nwoke mmụọ ọjọọ bi nꞌime ya, mmụọ ọjọọ ahụ sịrị ha, “Amaara m Onye Jisọs bụ. Amakwaara m Pọl, ma onye ka unu bụ?”
Nwoke ahụ mmụọ ọjọọ na-achị jidere mmadụ abụọ nꞌime ha tie ha ihe nke ukwuu, mee ka ha gbaa ọsọ. Ha gbaara ọtọ gbapụ nꞌụlọ ahụ. Ha merụkwara ahụ nke ukwuu nꞌakụkụ ahụ ha nile.
Akụkọ banyere ihe ndị a jezuru obodo Efesọs nile. Mgbe ahụ ndị Juu na ndị Griik ụfọdụ nụkwara ihe ndị a. Oke egwu jidere ndị obodo ahụ. Nꞌihi nke a, e mekwara ka aha Onyenwe anyị Jisọs daa ụda nꞌebe nile.
Ọtụtụ ndị chegharịrị bịara na-ekwupụta omume ọjọọ ha nile, nꞌihu mmadụ nile.
Ọtụtụ ndị na-agwọ ọgwụ mgbaasị, bupụtara akwụkwọ nile ha ji na-eme mgbaasị, kpọọ ha ọkụ nꞌihu mmadụ nile. A kpọkwara ọgwụ nile ọkụ. Akwụkwọ nile a kpọrọ ọkụ nꞌụbọchị ahụ ga-erukwa akwụkwọ a ga-eji puku naịra anọ zụta.
Ihe nile ndị a gosiri otu okwu Chineke si gbasaa, ma guzosiekwa ike.
Mgbe ihe ndị a gasịrị, Mmụọ Nsọ kwagidere Pọl ka o jeruo Griis tupu ọ bịaruo Jerusalem. Pọl kpebiri na ọ ghaghị ijeru Rom, nꞌọgwụgwu ije ya nile.
O buru ụzọ zipụ ndị na-enyere ya aka, bụ Timoti na Erastọs ka ha buru ụzọ jeruo Griis. Ma ya onwe ya nọgidere nꞌime Tọki ụbọchị ụfọdụ.
Ma ọ bụ nꞌoge a ka oke nsogbu malitere nꞌobodo Efesọs megide ọrụ mgbasa ozi ọma.
Onye malitere nsogbu ahụ bụ otu nwoke a na-akpọ Dimitriọs. Ọ bụ ọkpụụzụ nke ọlaọcha. O nwekwara ọtụtụ ndị e goro ọrụ ndị na-akpụ ụdị chi dị iche iche a na-akpọ Daịana, bụ chị ndị obodo Griik.
Nwoke a kpọkọtara ndị ọrụ ya nile, na ndị ọzọ ọrụ ha bụ ire chi ndị a. Ọ gwara ha okwu dị otu a sị, “Ndị a maara aha ha, okwu a bụ ihe banyere ụzọ anyị na-esi enweta akụ anyị na ihe anyị ji adị ndụ.
Unu nile ahụla, nụkwa ihe nile na-aga ugbu a. Unu maara ihe nwoke a na-akpọ Pọl na-agwa mmadụ nile na chi ọ bụla e jiri aka mee abụghị ihe ọ bụla. Nꞌihi nke a ahia anyị emebiela. Ọ bụkwaghị nanị nꞌime Efesọs ka ihe ndị a na-eme, kama ndị nile nọ nꞌokpụrụ obodo anyị mazuru ihe banyere okwu a.
Ọ bụkwaghị nanị na ụzọ anyị si enweta ihe oriri ka a ga-emechi site nꞌozizi ọjọọ nke Pọl, kama, ọ bụrụ na anyị agba nkịtị, hapụ igbochi ozizi a, ọ gaghị adịkwa anya, chi ukwu anyị Daịana, agaghị enwekwa nsọpụrụ. Otu aka ahụ obodo Tọki na ndị nile dị iche iche agaghị akpọkwa isi ala nye ya ọzọ. Ha ga-echefukwa ihe nile banyere ya.”
Ma mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha were oke iwe tie mkpu na-asị, “Ukwuu ka Daịana ndị Efesọs dị!”
Nꞌotu ntabi anya ahụ, igwe mmadụ gbakọrọ. Onye ọ bụla nꞌobodo ahụ nọ nꞌọnọdụ mgbagwoju anya. Ha nujiiri bata nꞌebe nzukọ ha, na-adọkpụgharị Gaịọs na Aristakọs ikpe ha ikpe, bụ ndị ha na Pọl na-arụkọ ọrụ.
Pọl gbalịsịrị ike ịbanye nꞌebe ahụ, ma ndị kwere ekwe nile gbochiri ya.
Otu aka ahụ kwa, ụfọdụ ndị enyi ya nꞌetiti ndị na-achị achị nꞌobodo ahụ zigakwara ya ozi na-arịọ ya, ka ọ hapụ iji aka ya kpatara onwe ya ọnwụ site nꞌịbanye.
Ndị obodo a nile nọ na-eti mkpu nꞌụlọ nzukọ a. Ebe ahụ nile jupụtara nꞌaghara. Nꞌezie, ọtụtụ nꞌime ha amataghị ihe ha jiri nọdụ nꞌebe ahụ.
Ụfọdụ ndị Juu hụrụ Alegzanda nꞌime igwe mmadụ ahụ, dọkpụrụ ya sepụta ya nꞌihu igwe mmadụ ahụ. Alegzanda feere ha aka ka ha dere duu mgbe ọ chọrọ ikwu okwu.
Ma nꞌotu ntabi anya ahụ, mgbe igwe mmadụ ahụ matara na ọ bụ onye Juu, ha bidoro iti mkpu ihe dị ka ogologo awa abụọ na-asị, “Ukwuu ka Daịana ndị Efesọs dị! Ukwuu ka Daịana ndị Efesọs dị!”
Nꞌikpeazụ, onye na-elekọta obodo, kwụsịrị ha nꞌụzụ a. Ọ gwara ha okwu sị, “Ndị ikom Efesọs, onye ọ bụla maara na obodo Efesọs bụ obodo a maara aha ya nꞌihi chi anyị a na-akpọ Daịana onye oyiyi ya si nꞌeluigwe daara anyị.
Lee ugbu a, unu sepụtara nꞌebe a ndị a na-abụghị ndị ohi, ndị na-ezukwaghị ihe ọ bụla nꞌogige chi nwanyị a a na-akpọ Daịana, ma ha emerụkwaghị ya.
Ọ bụrụ na Dimitriọs na ndị ọkpụụzụ ibe ya nwere ihe ọ bụla megide ha, ha gaa nꞌụlọ ikpe. Ndị na-ekpe ikpe ga-eleba okwu ha anya. Kama ha mee ya nꞌusoro iwu.
Ma ọ bụrụ na ha nwere ihe ọzọ bụ mkpa ha, a pụrụ imedo ya na nzukọ ndị ọchịchị obodo.
Nꞌihi na anyị na-etinye onwe anyị na nsogbu ịsa ajụjụ nꞌihu ndị isi Rom, nꞌihi aghara nile nke ụbọchị taa. Ma nke ka nke, ọ dịghị ihe anyị ga-asị na ọ bụ isi aghara a. Amaghị m ihe m ga-ekwu ma ọ bụrụ na akpọọ m.”
Mgbe ọ gbasara ha, ha nile lakwara.
ỌLU OZI 19:1
ỌLU OZI 19:2
ỌLU OZI 19:3
ỌLU OZI 19:4
ỌLU OZI 19:5
ỌLU OZI 19:6
ỌLU OZI 19:7
ỌLU OZI 19:8
ỌLU OZI 19:9
ỌLU OZI 19:10
ỌLU OZI 19:11
ỌLU OZI 19:12
ỌLU OZI 19:13
ỌLU OZI 19:14
ỌLU OZI 19:15
ỌLU OZI 19:16
ỌLU OZI 19:18
ỌLU OZI 19:19
ỌLU OZI 19:20
ỌLU OZI 19:21
ỌLU OZI 19:22
ỌLU OZI 19:23
ỌLU OZI 19:24
ỌLU OZI 19:25
ỌLU OZI 19:26
ỌLU OZI 19:27
ỌLU OZI 19:28
ỌLU OZI 19:29
ỌLU OZI 19:30
ỌLU OZI 19:31
ỌLU OZI 19:32
ỌLU OZI 19:33
ỌLU OZI 19:34
ỌLU OZI 19:35
ỌLU OZI 19:37
ỌLU OZI 19:38
ỌLU OZI 19:39
ỌLU OZI 19:40
ỌLU OZI 19:41